Culluxxoo Siyyaasaa! – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA
Dachaasaa Deebisaatiin —-
Baroota dheeraaf qabsoo abboonni keenya itti wareegamaa as gahan harkaatti galfachuun gartuun eegamtuu wayyaanee OPDOn sagaleen haalaakaa turun waanuma baratame. Baroota 90 keessa afaan marartoon sagalee ciratanii, haaromsaan of suphuuf maggaaluun bultii waggoota muraasaa itti tajaajilamaa turan. Kanumatti dabaluunis dhaaba uummatichaa ABO irratti duula jibbiinsaaf summii diinummaa biifuuf
‘documentary’ dhoqqee cubbuun faalame dalagatanii isaaniis halkan muraasa bulanii jiran. Akkasuma gartuu hiyyumaan gadadamu walitti coruun akka waan WBO barbadeessaniitti miidiyaa isaanii midiyaa dhugaa faana laga gamaaf gamanaan dhaadataa turuun OPDO eenyu dura kan dhokate miti.
Qeerroon Bilisummaa Falmaa Itti Fufna!!